बा-आमा बितेपछिका दसैं खल्लो भए : निरु खड्का
नेपाल लाइभ मंगलबार, असोज २१, २०७६, ०९:००
काठमाडौं- कलाकार निरु खड्का नेपाली दर्शकहरूमाझ परिचित नाम हो। हास्य टेलिसिरियल 'मेरी बास्यै'मार्फत् लोकप्रिय बनेकी उनले थुप्रै म्युजिक भिडियोमा अभिनय तथा निर्देशनसमेत गरेकी छन्। उनीसँग नेपाली लाइभका समर्पण श्रीले गरेको दसैंविशेष कुराकानी:
दसैं कसरी मनाउनुहुन्छ?
आफन्तजनको टीका लगाएर आशीर्वाद थापेर मनाउँछु। त्यसमाथि दसैंमा त आफन्तसँग भेट हुन्छ। त्यतिबेला भने एकदमै रमाइलो लाग्छ।
दसैंमा बिर्सन नसक्ने घटना?
विगतका दसैं मेरो लागि त्यति रमाइला थिएनन्। त्यतिबेलाका राम्रा भन्दा दु:खद् यादहरू बढी सम्झन्छु। मेरो ममी दसैं नवरात्रीको चौथो दिन अनि बुबा अष्टमीको दिन बित्नुभयो। केही वर्षको समय अन्तरमा। उहाँहरू बितेपछिका मेरा निम्ति हरेक दसैं खास लागेनन्। यद्यपि, बिहेपछिका दसैंमा भने राम्रा अनुभव साँच्न पाएँ।
दसैं भन्नेबित्तिकै तपाईंलाई सबैभन्दा पहिला के-को झल्को आउँछ?
दसैंभन्ने बित्तिकै मलाई झापामा मामाघरको आँगन, अम्बाको बोट, बिहानीको उदाउँदो सूर्यको किरण अनि लह लह झुलेको धानको बालाको याद आउँछ।
दसैंमा माटोको मीठो सुगन्ध र हावामा उक किसिमको मिठास भेटिन्छ।
दसैं नमनाएको कुनै वर्ष छ? त्यो बेलाको अनुभव कस्तो थियो?
आमा र बाको देहान्तमा दसैं मनाइएन। त्यो बेलाको पीडा र दु:खद् अनुभव सायद कहिल्यै भएनन्। त्यसपछिका कति वर्ष त दसैं कसरी बिते याद्गार पनि छैनन्।
दसैंमा पुस्तक पढ्ने बानी छ?
पढ्छु। पढ्ने बानीको विकास बल्ल हुँदैछ। रुचि बढ्दैछ। घरको कामबाट फुर्सद मिल्ने बित्तिकै पढ्छु। पहिलाचाहिँ पुस्तक हात लाग्नासाथ पढ्थें। आजकल अलि बढी अध्यात्मिक र प्रेरणा दिने किसिमका पुस्तक बढी पढ्छु। नेपाली साहित्यमा बजारमा आएका नयाँ पुस्तकचाहिँ पहिला प्रतिक्रिया सुन्छु अनि मात्र किन्छु।
के-के पुस्तक पढ्दै हुनुहुन्छ?
अहिले म लुइस लिन हेको 'यु क्यान हेल योर लाइफ' पढ्दैछु। 'चित्त खुलोस हृदयसँगै' भन्ने पुस्तक नि पूरा पढ्नुछ।
बाल्यकालको दसैं कस्तो थियो?
बाल्यकालको दसैं एकदमै रमाइलो थियो। मामाले दसैंमा नयाँ लुगा किनिदिनु हुन्थ्यो। त्यो पनि बहिनी र मेरो लागि उस्तै किसिम को। त्यो लुगाको वासना खुब मन पर्थ्‍यो मलाई। पिङ निकै खेलिन्थ्यो। दसैं भन्ने बित्तिकै आमाले किनिदिने लुगाको पर्खाइ हुन्थ्यो। मन लागेको खानेकुरा खान पाइने, घुम्न पाइने र दक्षिणा जम्मा गर्न पाइने। बुवाले साइकलमा राखेर आफन्तको टीका लगाउन सँगै लिएर जानु हुन्थ्यो।
सबैभन्दा मन पर्ने दसैं गीत कुन लाग्छ?
दसैं भनेपछि मलाई मालश्री धुन नै बढी मन पर्छ र त्यही याद आउँछ।